Zvigadziriso zvikamu vagadziri uye vanotengesa - China Zvishandiso zvikamu Zvigadzirwa fekitori
360L Dustbin Chikamu saizi: 867 X 751 X 1059 mm Mould saizi: 1795X1695X1865 mm Mould huremu: 44345 kg Muchina: HT 3300T Solution uye chakuvhuvhu kugadzira kwe dustbin, pallet, crate etc.Mazhinji eforoma anotumirwa kune vatengi muEurope neAmerica musika. . Parizvino tinogona kupa hombe muforoma weighting kusvika 90T. Isu tinokwanisa kugadzira dustbin molds kubva pa40L kusvika 3200L. Tine ruzivo rwakapfuma rwatakawana gore rimwe nerimwe, zviumbwa zvedu zvinogona kuve nekukurumidza kwazvo kutenderera nguva uye hupenyu hwakareba hwevhu. Tinogona kupa m ...
240L Dustbin Chikamu saizi: 734 * 585 * 1034mm Saizi saizi: 1200 * 1350 * 1615mm Murema uremu: 20830kg Dhizaini yekugadzira: 2500T Solution uye chakuvhuvhu kugadzira yevhu, pallet, crate etc.Mazhinji eforoma anotumirwa kune vatengi muEurope neAmerica musika. Parizvino tinogona kupa hombe muforoma weighting kusvika 90T. Isu tinokwanisa kugadzira dustbin molds kubva pa40L kusvika 3200L. Tine ruzivo rwakapfuma rwatakawana gore rimwe nerimwe, zviumbwa zvedu zvinogona kuve nekukurumidza kwazvo kutenderera nguva uye hupenyu hwakareba hwevhu. Tinogona kupa ...
120L Dustbin Chikamu saizi: 552 * 480 * 899 mm Mould saizi: 1050 * 1100 * 1479mm Mould uremu: 13315kg Kugadzira muchina: 2400T Solution uye chakuvhuvhu kugadzira kwe dustbin, pallet, crate etc.Mazhinji eforoma anotumirwa kune vatengi muEurope uye America musika. Parizvino tinogona kupa hombe muforoma weighting kusvika 90T. Isu tinokwanisa kugadzira dustbin molds kubva pa40L kusvika 3200L. Tine ruzivo rwakapfuma rwatakawana gore rimwe nerimwe, zviumbwa zvedu zvinogona kuve nekukurumidza kwazvo kutenderera nguva uye hupenyu hwakareba hwevhu. Tinogona kupa ...
110L Dustbin Chikamu saizi: 552 * 480 * 899 mm Mould saizi: 1050 * 1100 * 1479mm Mould uremu: 13315kg Kugadzira muchina: 2400T Solution uye chakuvhuvhu kugadzira kwevhu, bhata, crate etc.Mazhinji mafuru anotumirwa kune vatengi muEurope uye America musika. Parizvino tinogona kupa hombe muforoma weighting kusvika 90T. Isu tinokwanisa kugadzira dustbin molds kubva pa40L kusvika 3200L. Tine ruzivo rwakapfuma rwatakawana gore rimwe nerimwe, zviumbwa zvedu zvinogona kuve nekukurumidza kwazvo kutenderera nguva uye hupenyu hwakareba hwevhu. Tinogona kupa ...